Kwiiveki ezimbalwa, besithetha malunga nokuba kungenzeka kwenkampani yaseKorea i-Samsung ibhengeze i-terminal entsha eneekhamera ezingaphezu kwesithathu, ngakumbi ezine, ekubeni Isiphelo sokuqala ukufikelela kwintengiso ngenani elinjalo Iikhamera. Ngokwamahemuhemu onke, esi siginali sitsha sinokuba yiGalaxy A9.
Kodwa le ndawo ayizukuba yeyokuqala kwinkampani ukufikelela kwimarike ngeekhamera ezingaphezulu kwesibini, kuba Galaxy A7 Yisiphelo sokuqala kwi ilingana nenani leekhamera ezibonelelwa yiHuawei P20 Pro. Nangona okwangoku kungekho siqinisekiso sisesikweni, apha ngezantsi sikubonisa ukuba inokuba yintoni inkcazo yale ndawo intsha.
IGalaxy A9 entsha eneekhamera ezi-4 ngasemva kwayo, iya kuba nefayile ye- Iscreen se-6,38-intshi enesisombululo esipheleleyo se-HD + kwaye iya kulawulwa yiQualcomm's Snapdragon 660. Ukuze ubonelele ngokuzimela ngokwaneleyo ngalo lonke usuku, ukubheja kwe-Samsung kwibhetri eyi-3.720 mAh. Ngelixa i-Galaxy A7 entsha eneekhamera ezintathu inenzwa yeminwe ecaleni, i-A9 2018 entsha inokuyidibanisa ngasemva.
Ngokubhekisele kwicandelo lokufota, i-Galaxy A9 iya kuba nayo I-24 mpx sensor ephambili kunye ne-8 mpx sensor-angle angle ene-120-degree degree of view, Iyafana kakhulu, ukuba ayifani ncam, nezo zinikezelwa yi-Galaxy A7 2018. Le modeli intsha inokuba ne-10 mpx zoom kunye ne-5 mpx sensor eyongezelelweyo. Enye yezi zivamvo iya kwenzelwa ubunzulu bentsimi ukuphucula ukufiphala kwimizobo. Ikhamera yangaphambili yesixhobo, iya kufikelela kwi-24 mpx.
Ngokucacileyo, siyathetha, kwakhona, ngamarhe angaqinisekiswanga, ke kuyakufuneka silinde ixesha elizayo. 11 ngo-Oktobha Ukujonga ukuba yonke le datha iqinisekisiwe na.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Oku kunokuba yinkcazo ye-Samsung entsha ye-smartphone eneekhamera ezi-4
Kodwa ukuba ulipapashile eli nqaku ngo-12: 00 ngokunjalo. Omnye umbhali, kodwa umxholo ofanayo. Ngaba kukusilela ????
Yenza kwaye ungazenzi ukuba ifowuni yakho ye-Android iba manzi